मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड : काम गर्नभन्दा पनि ज्यान जोगाउन गाह्रो (भिडियोसहित) - Ratopati
मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड : काम गर्नभन्दा पनि ज्यान जोगाउन गाह्रो (भिडियोसहित)
मङ्सिर १० | रातोपाटी
चितवन– मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डमा हाकिम कति बिन्दास छन् । तपाईंले पढ्नुभयो । छुट्याउनुभएको भए यो समाचार पढ्नुहोला ।
हाकिम बिन्दास भए पनि मजदुरका दुःख धेरै छन् । हामीले यो सडक खण्डको अनुगमनमा देख्यौँ ।
यहाँ चौबीसै घण्टा निरन्तर गुड्छन् दसौं हजार सवारीसाधन । धुलो र धुवाँ मिसिएको हावा, चट्टाने पहरामुनि पहेँलो हेल्मेट र सुन्तला रङको रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगाएर ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट र पसिनासँग राजमार्गमा हेल्लिइरहेका छन्, सडक–मजदुरहरु ।
मजदुरको पौरखविना कहाँ बन्छ र सडक ? कहाँ बन्छन् र आश्र्चय तुल्याउने ठूला, ठूला भौतिक संरचनाहरु ? एकछिन रोकिएर उनीहरुसँग मन साट्ने हो भने हरेक मजदुरहरु उपन्यासका पात्र जस्ता छन् । हरेकका आफ्नै कथा, व्यथा छन् । आफ्नै किसिमका जीवन भोगाइ र अनुभूतिहरु छन् ।
सडक निमार्णमा खटिने यी मजदुरहरु विभिन्न जातीय पृष्ठभूमिका छन् । विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमिका छन् । तर त्यहाँ न कुनै जातीयाको गन्ध छ न त कुनै क्षत्रीयताको । न त कुनै वर्गीय अहमता । साबेल, बेल्चा, पिक, घन, गलजस्ता ज्यावेल लिएर सडक बनाउन खटिएका दर्जनौँ श्रमिकमध्ये एक हुन्– नरबहादुर खत्री ।
सुर्खेतका यी खत्रीको आधा जीवन यसरी सडक निमार्णमै बित्यो । घाम, पानी, आँधी–हुरी समयका यावत क्षण हातमा ज्यावत समाएर हिँड्ने हजारौँ बाटो बनाउन खर्चिए ।
सडक बनाउने काम कहाँ सजिलो छ र ? गाडीको टायरले उडाएको धुलो खाँदै सडकको किनारामा हरेक दिन ढुङ्गा माटोसँग पौँठेजोरी खेल्नुपर्छ ।
काम देखिएन भने यस्तो भएन भन्ने सुपरभाइजरको खप्की खानुपर्छ । बनेको ठाउँलाई कहिलेकाहीँ माथिबाट ढुङ्गा–माटो झरेर पुरिदिन्छ, फेरि त्यसलाई हटाउने दोहोरो काम आइदिन्छ ।
काम गर्नभन्दा पनि ज्यान जोगाउन गाह्रो । ढुङ्गै ढुङ्गाको पहाडमुनि बाटोको रेखा कोर्न कम्ता मुस्किल छैन । निरन्तर झर्ने ढुङ्गा माटोको पहिरोले पटक–पटक घाइते हुँदै काम गर्नु जोखिम हो । जोखिम छ भन्ने बुझेर पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता र व्यथा ।
नरबहादुर खत्रीले नेपालका पहाडमा मात्र घर बनाउने काम गरेनन्, उनले भारतका धेरै पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउने काम गरेका छन् । भन्छन्– ‘मैले भारतका धेरै पहाडमा सडक बनाउने काम गरेँ, यहाँको जस्तो कडा ढुङ्गा कही पनि भेटिन । पहाडबाट ढुङ्गा बगिरहनछ ।’ काम गरेको ठाउँमा माथिबाट ढुङ्गा–माटो बगिरहन्छ । आफूमाथिको पहरो हेरेर बस्ने कि बाटो बनाउने काम गर्ने । पहरो हेरेर बस्ने सहयोगी भए थोरै भए पनि ढुक्कले काम गर्न पाइने खत्री बताउँछन् ।
दुःखी मान्छेलाई कहीँ पनि सुख छैन
मुग्लिन नारायणघाट सडक खण्डमा मजदुरी गर्ने सुर्खेतका उदयराम कटुवाल सडक बनाउन बालुवा सिमेन्टको मसला बनाउने र मिस्त्रीहरु भए ठाउँसम्म पुर्याउने काम गर्छन् । उनी भन्छन्– ‘माथिबाट पहिरो खस्ला भन्ने मनमा पीर बोकेर बिहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर मसला बनाएको बनाई गर्नुपर्छ, दुःखी मान्छेलाई कहीँ पनि सुख छैन ।’
४२ वर्षका कटुवालले यसअघि पनि मजदुरी गर्थे, सडक बनाउने काममा मजदुरी गर्न भने यस वर्ष मात्र थालेका हुन् । सडक बनाएर परिवारको जीवन धान्ने सपना बोकेका कटुवाल बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक दिन सडकसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
थापा–खत्री किशोर मजदुर
सुर्खेतका दुई किशोर मजदुर पनि छन् यो सडक खण्डमा ढुङ्गा–माटोसँग खेल्नेको पङ्क्तिमा । स्कुले जीवनको बीचबाटोमै रिटायर्ड भएका यी दुई किशोर गाउँका पनि मिल्ने साथी थिए । अहिले मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डमा यी दुइ भाइसँगै मिलेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । सुरेन्द्र खत्री । उमेर १७ वर्ष । ९ कक्षा पुगेपछि पढाइ छोडेको ।
प्रकाश थापा । उमेर । १८ वर्ष । ३ कक्षामा छोडेको ।
उनीहरु पहिलो पटक सडक बनाउने काम सुरु गरेका हुन् । काम थालेको भर्खर एक साता भयो । सडक बनाउने काम सजिलो नहुने दुवैको अनुभव छ । दुःख र गाह्रो पनि । उनीहरु काम गर्न केही महिनाअघि काठमाडौँ आएका थिए । भैँसेपाटीमा घर बनाउने काम गरेपछि सोही ठेकेदार मार्फत उनीहरु राजमार्गमा आइपुगेका हुन् ।
दुई छाक खाएर दैनिक ५ सय ज्याला आउँछ । काम गर्दा–गर्दै माथिबाट पहिरो खस्छ, भागाभाग गर्नुपर्छ । धुलो–धुवाँले उत्तिकै सताउँछ ।
पर्खाल बनिरेहेको ठाउँसम्म ढुङ्गा–मसला पुर्याउने, ढुङ्गा फुटाउने र अरु आवश्यक परेको सहयोग गर्नु उनीहरुकोे जिम्मेवारी हो ।
किन छिट्टै स्कूल छोडेको ?
उनीहरुले निश्चल हाँसोको साथ जवाफ दिए– ‘यस्तै त हो नि गरिब मान्छे ।’
सुरेन्द्रको घरमा बुवा, ममी, दिदी र बहिनीसहित ६ जनाको परिवार छन् । प्रकाशको घरमा पनि बुवा, ममी, दाइ बहिनीसहित ५ जनाको परिवार छन् । बाटोमा काम गर्दा आएको आधा पैसा परिवारलाई दिने र आधा आफैले खर्च गर्ने उनीहरुको योजना छ ।
उदयपुरको गाईघाटबाट सडक बनाउने काममा आइपुगेका अर्का मजदुर हुन्– शारद राई । २४ वर्षका राई यसअघि काठमाडौँमा घर बनाउने ठाउँहरुमा मजदुरी गर्थे । जे काम आइलाग्छ, त्यही काममा मजदुरी गर्ने उनी बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सडक निमार्णमा खटिन्छन् । अब एक–दुई महिना काम गरेर घरमै काम गर्ने सोचाइ बनाएका छन् राईले ।
नुवाकोटबाट आएका बुद्धिबहादुर लामाले राजमार्गमा काम गर्न थालेको ५ महिना भयो । गाडी ओहोर गर्ने ठाउँमा ठाउँमा काम गर्न निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । मिस्त्रीको काम गर्ने उनी सडक निमार्णका लागि आइपरेको हरेक काम गर्छन् ।
सडक बनाउने यी मजदुरहरु जस्तै अन्य मजदुरको पनि भोगाइ उस्तै छन् । काम नगरी केही बन्दैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । उनीहरु मज्जाले काम गर्न चाहन्छन् । तर एउटै चिन्ता छ, माथिबाट कतिबेला पहाड खस्ने हो ।
र, पढनुहोस्, यो सडक खण्डका यी समाचार
सावधान ! तस्बिर र भिडियोमा हेर्नुहोस्, मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डका १८ ‘एम्बुस’ !
मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा यसकारण हुन्छ धेरै दुर्घटना
जोखिमपूर्ण मुग्लिन–नारायणघाट सडकमा यस्ता छन् ड्राइभरका दुःख
जब देशमा यसरी हुन्छ विकास..(भिडियोसहित)